Raha tianao ny Incredimail, andramo ny molto ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Herinandro vitsivitsy lasa izay miresaka momba ny mpitantana mailaka isan-karazany izahay misy ho an'ny iPad. Ny iray tamin'izy ireo dia Incredimail. Ity rindrambaiko ity dia tsy misy afa-tsy amin'ny iPad ihany hatreto. Nanapa-kevitra ihany izy ireo tamin'ny farany mba hanao kinova ho an'ny iPhone. Fotoana izao satria efa ela aho no te hankafy ity fampiharana mahafinaritra amin'ny iPhone ity.
Amin'ny fomba nanararaotan'izy ireo ny fotoana omeo anarana ny app iPad hampitambatra azy ireo. Ankehitriny, ny Incredimail dia nantsoina hoe Molto, ao amin'ireo kinova roa (iPad sy iPhone) ary maimaim-poana koa izany.
Molto dia mpanjifa mailaka natao hampiasa ny mailakantsika amin'ny alàlan'ny iPhone sy iPad. Azonao atao ny manamarina ireo mailaka vaovao, ankoatry ny fandefasana azy ireo amin'ny traikefa vaovao tanteraka, tsy misy zavatra mitovy amin'ny efa hitanao tany amin'ireo mpitantana mailaka hafa toa ny Mail, nefa tsy mandeha lavitra intsony.
Noforonina hampidirina ity rindranasa ity ny filantsika mamokatra, manamora sy mahafinaritra kokoa ny mitantana mailaka vaovao. Mamadika ny mailaka amin'ny haino aman-jery fifandraisana. Rehefa mamaky ny mailaka ianao dia manome anao ny fahatsapana fa mamaky bilaogy ianao fa tsy ny boaty, miaraka amin'ny sarin'ilay olona nandefa anao ilay mailaka teo afovoany.
Ho fanampin'ny boaty fampidirana misy fisehoana mazava tsara dia azonao atao ny miditra amin'ireo mpifandray be mpampiasa indrindra amin'ny alàlan'ny lisitra All Stars, avy amin'ny efijery menio. Avy eo mandefasa mailaka amin'ny fikitika tokana na jereo ny fifandraisan'izy ireo amin'ny Facebook avy amin'ireo olona ifandraisanao. Ny endrika vaovao, nifanaraka tamin'ny iPhone, dia manome antsika ny fahatsapana fa miresaka amin'ny namantsika isika fa tsy mijery ny mailak'izy ireo.
Azonao atao ny manisy sivana hividianana lahatahiry hafa ireo hafatra izay tsy dia manandanja loatra, ary avelao ho hitan'ny masony ireo lohalaharana. Aseho amin'ny efijery feno ireo hafatra mba ho mora vakina kokoa ary tsy ho variana amin'ireo singa hafa eo amin'ny efijery.
Afaka mamaly haingana ianao, mandefa any amin'ny fako, mariho ho laharam-pahamehana na tsy mbola voavaky / vakio tsindrio fotsiny ny sarin'ilay mpandefa. Rehefa manindry dia hiseho ireo safidy misy ary amin'ny fikitihana azy ireo fotsiny dia hataontsika ilay asa tadiavina. Toy ny mpanjifa mailaka hafa toa ny Mailbox, afaka swipe miankavanana na miankavia ianao hamafa ireo hafatra na hanisy marika azy ireo ho manan-danja sy mbola tsy voavaky….
Miaraka amin'ny pinch tsotra eo amin'ny efijeryAzonao atao ny mampihena ny fijerin'ny mailaka rehetra amin'ny lisitry ny anarana sy ny tsipika fizahana hahitana manerantany ny fampahalalana rehetra ao anaty boaty.
Nampiasa an'ity rindrambaiko iPad ity nandritra ny volana maromaro aho, ary toy ny a tad miadana rehefa misintona mailaka ary tantano izy ireo. Toa tamin'ny endriny vaovao novaina sy namboarina tamin'ny iPhone, io fitantanana io dia voarindra ary tsy dia mankaleo ao anatin'ny fotoana fohy.
Maimaimpoana, tsy mandany vola na kely aza ny fanandramana azy. Raha efa fantatrao amin'ny iPad izany ary tianao izany dia ampirisihiko ianao hametraka azy amin'ny iPhone.
Fanazavana fanampiny - Leo ny mailaka? Safidy hafa hitantanana mailaka amin'ny iPad: Incredimail, Mail + Outlook ary Evomail
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Raha tianao ny Incredimail, andramo i Molto ny kinova iPhone
"Ny iPhone 5c dia tsy iPhone ho an'ny mahantra," hoy i Tim Cook